कस्तो बनेको छ दयाहाङ अभिनित चलचित्र "तान्द्रो"? समीक्षा | Hamro Patro
दयाहाङ राइले फेरी एकपटक तपाइहरुको मन जित्नेछन् । "व्हाइट सन" पछि यो उनको अर्को अब्बल प्रस्तुति हो । रामबाबु गुरुङ्गको सानो भूमिकाले धेरै प्रभाव पार्दछ । दर्शकले उनलाई भुल्दैनन् । त्यसबाहेक बुद्धि तामांगले पनि उत्कृष्ट अभिनय गरेका छन् । बाँकि सबै कलाकारको अभिनय उत्कृष्ट छ ।
चलचित्र "तान्द्रो" समीक्षा
१० बर्ष जनयुद्ध हाम्रो देशले भोगेर आएको छ । यो लामो युद्धसंगै देशमा थुप्रै परिवर्तन मात्र आएनन् । यो कष्टकर समयमा थुप्रै यस्ता सत्य कथाहरु पनि जन्मिए जुन सायद धेरै कसैलाई थाहा छैन । यस्तै एउटा कथा छ गगन बहादुर लामाको जसलाई उनले "स्मृतिका डोबहरू" नामक किताबमा उतारेका छन् । निर्देशक साम्तेन भुटियाले त्यहि किताबमा आधारित रहेर निर्देशन गरेको चलचित्र "तान्द्रो" आज रिलिज भएको छ । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन भएर राम्रो चर्चा बटुल्न सफल फिल्म अब निर्माण भएको केहि समयको अन्तरालपछी यहाँ प्रदर्शन गरिएको हो । चलचित्र "तान्द्रो" कस्तो छ त ? आउनुहोस् जानौं समीक्षामा ।
यो पनि हेर्नुहोस् : कथाकार - "शुभविवाह"
कामरेड कोशिश देशमा राजनैतिक परिवर्तन ल्याउन युद्धरत छन्, एकदिन सेनाले अकश्मात् गरेको आक्रमणमा उनको टोलिबाट कोहि फरार हुन्छन् भने कोहि शहीद बन्न पुग्छन् । त्यतिबेला नै आफ्नो घुँडामा गोलि लागेर घाइते हुन पुगेका दयाहाङ राइ भने जसोतसो बाँच्छन् तर उनि हिंडडूल गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । चलचित्र "तान्द्रो"मा एउटा घाइते क्रान्तिकारीको कथालार्इ प्रस्तुत गरिएको छ । कस्तो छ उनको अवस्था ? उनले कसको मद्दत पाउँछन् ? कसरि हुन्छ उनको गुजारा ? यो सबै कुराहरु थाहा पाउन यँहाले चलचित्र "तान्द्रो" हेर्नपर्ने हुन्छ ।
सत्य घटनामा आधारित यो चलचित्रको कथा कुनै व्यवसायीक नेपाली चलचित्र जस्तो मसलाले भरिएको अवश्य छैन । यो कुरा चलचित्र हेर्न जानु अघिनै दर्शकले बुझ्न जरूरी हुन्छ । यो एउटा पीडामा रहेको घाइते क्रान्तिकारीको कथा हो जसले अवश्य तपाइको मनलार्इ सताउनेछ या भनौं कुत्कुत्याउनेछ । चलचित्रको पटकथा पनि अव्वल छ । एउटा दृश्यमा एउटा सानो बच्चाले आफ्नो अञ्जुलीमा पानी ल्याएर दयाहाङलार्इ दिन्छिन् जुन निक्कै उत्कृष्ट छ र त्यस दृश्यले थुप्रै कुराहरु बुझाइदिन्छ, चलचित्रका संवादहरु पनि ठिक छन् ।
प्राविधिक पक्ष / निर्देशन
पुरुषोत्तम प्रधानको छायाङ्कन ठिक छ र उनको प्रायः अरु चलचित्र भन्दा भिन्न छ । सुजिल कर्माचार्यको ब्याकग्राउण्ड सङ्गीत अव्वल छ, चलचित्रलार्इ कथावस्तुसङ्गै व्याख्या गर्न उनको सङ्गीतले न्याय गरेको छ । निर्देशक साम्तेन भुटियाले चलचित्र तान्द्रोलार्इ आफुले देखाउन खोजेको कथामै सिमित राखेका छन् । उनले सानो कथालार्इ इङ्गेजिङ बनाउन सफल भएका छन्, उनको काम अब्बल छ ।
समग्रमा "तान्द्रो" अब्बल चलचित्र बनेको छ । तर यो चलचित्रले नेपालमा सिमित दर्शक पाउनेछ । यदि तपाईहरु स्तरीय र क्लासि चलचित्रको सौखीन हुनुहुन्छ भने यो हफ्ताको रिलिज "तान्द्रो" नछुटाउनु होला ।
रेटिंग : ३.५ / ५